I-A-Frame e-Harvestoon Acres - I-Airbnb
I-A-Frame e-Harvestoon Acres
Stamford, New York, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Deb
Siyakwamukela ku-Harvestmonth Acres, i-A-Frame esanda kulungiswa ese-Stamford, "i-Queen of the Catskills."
Jabulela ukuzulazula kuma-acre ethu ayisithupha azimele, ukushona kwelanga okumangalisayo nokubuka inkanyezi yomlingo lapho ilanga selishonile. Ikhaya lethu linikeza amakamelo okulala amabili amahle ngokukhululekile okulala amane, anendlu yangasese eyodwa. Vuka ngokubuka kusuka kuwo wonke amagumbi futhi uchithe isikhathi sakho sakusihlwa emphemeni ongaphambili ujabulela i-cocktail yokushona kwelanga.
Ukuvuna i-Moon Acres iyindawo yokuvakasha yangasese engama-acre angu-6. Ezinye izici ezikhethekile esizijabulelayo yi-firepit yangaphandle, i-deck enkulu ene-grill, i-fireplace yangaphakathi, i-inthanethi enejubane elikhulu, isidlali-marekhodi, nomshini wokuwasha/wokomisa.
Ikamelo lethu eliyinhloko lisesitezi esiyinhloko elinombhede omkhulu futhi ikamelo lethu lesibili elineloft lihlanganisa umbhede weNdlovukazi nokubukeka kwenyanga, okufinyeleleka ngecala lezitebhisi ezizungezile. Isitolo sokudla, isitolo sotshwala, isiteshi segesi nesitolo esivamile kungakapheli imizuzu engu-10 uhamba ngemoto. Idolobha lase-Hobart, eliphawulwe ngokuthi "i-The Book Village" linezitolo eziningi zezincwadi zakudala edolobhaneni lalo elihle futhi liphinde libe yimizuzu engu-10 uma uhamba ngemoto. Eduze kwazo zonke izintaba ezine ze-Catskill ski, i-Pltekill, i-Bellayre, i-Windham ne-Hunter. Jabulela imisebenzi yabo yasebusika kanye nelanga lenkathi yonyaka, kuhlanganise nokuqwala izintaba, imizila yamabhayisikili, igalofu, ukudoba ngezindiza ezidume umhlaba wonke, i-zip-lining kanye ne-kayaking.
I-HDTV engu-52" ene- Isevisi evamile ye-cable kamabonakude, Hulu, I-Netflix, I-Amazon Prime Video
Indawo yethu isezintabeni ze-Catskill enokubukeka okuhle, imifudlana eminingi namachibi okudoba nokugwedla, kanye namapulazi amaningi anezinkomo, izimbuzi, izimvu, amahhashi nama-ponies angabukwa ngenkathi ushayela imigwaqo emihle kakhulu.
Umbungazi wakho ukude ngemoto futhi uyatholakala uma kudingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Stamford namaphethelo